Guriga > Tareen Safar Talyaani > Hotels Best Near Tareen Stations In Italy
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 27/08/2021)
Talyaaniga, mid ka mid ah Europe ee ugu caansan meelaha vacation, waxaa oo dhan ayaa. A taariikhda dhaqanka hodanka ah, hotels raaxo, cunnada adduunka caan, naqshadaha, goobaha quruxda dabiiciga ah ... ka dibna waxaa jira shopping! U safarka Italy tareen waa waayo-aragnimo breathtaking. Waxaad ka heli in ay ku raaxaystaan ​​oo dhan oo ka mid ah muuqaal qurux badan jidka halkii kooleeyay off in diyaarad. Marka aad gaarto magaalada aad dooratay, waxaa jira toban kun meelaha picturesque in uu sii joogo. Si aad safar dheeraad ah oo ku haboon, waxaana lagu soo koobay ilaa qaar ka mid ah hoteelada aadka loo qiimeeyo - mid kasta oo iyaga ka mid ah tuuro dhagax Diintooda ee ka tareenka. Kuwanu waa hotels Best u dhow xarumaha tareenka ee Italy.
hotel Tani waa doorashada ugu fiican ee musaafiriinta xiiso art, dhaqanka, iyo cuntada. Waa dhowr daqiiqo ka dhan ah goobaha ugu waaweyn. Waxaad ka arki kartaa Maria Santa ka Novella midig ka baxsan albaabka hore, iyo gudahood kaliya hal kilomitir, Waxa kale oo aad booqan kartaa Cathedral Florence ee, Piazza della Signoria, Buundada Hore, iyo Pitti Qasriga.
Raadinta shopping qaar ka mid ah ama cunto yar soo cuno? U qaado socod lug ah suuqa San Lorenzo ama Sant’Ambrogio oo hubi inaad booqato Buca Maria ama Gelateria la Carraia si aad u cunto.
Fashion waa magaca ciyaarta ee Milan - si meesha ka wanaagsan inuu sii joogo badan Hotel rayn Tocq? hotel ku yaal bartamaha Milan, sidaas oo kale ayaa ka socdeen Via Montenapoleone, Qasriga Sforzesco, iyo La Scala Tiyaatarka yihiin dhammaan gudahood gacan 2km a, samaynta indhaha si fudud lugeyn. Duomo Milan ayaa sidoo kale ku dhow, in ka badan 2km.
Huteelkii ugu dambeeyay ee ugu fiicnaa ee u dhow saldhigyada tareenka ee Talyaaniga waa The UNA Hotel Napoli, dhismaha ah taariikhiga rasmi ah dib loo soo celiyo oo ku yaalla ka soo hor jeedda saldhigga tareen dhexe ee Naples. Ku raaxayso cabniin ah ee Terrace hotel bar ah, taas oo uu leeyahay aragti ah ee volcano Vesuvius ah. Haddii aad go'aansato in aad hesho wax yar u dhaw in ay view in, waxaad qaadan kartaa a tareen kortaan gaaban si aad u aragto Pompei iyo Buur Vesuvius.
Waxaa jira meelo badan oo taariikhi ah cajiib dhow, sidaas Naples joogista dheer haddii aad awoodid. Waxaad awoodi doontaa u soco Cathedral -ka ee Naples, Santa Lisbon, San Gregorio Armeno, San Lorenzo Maggiore, Ciidanka Booliisku Museum Qaranka, iyo sidoo kale wadada Duomo ee xarunta magaalada taariikhiga ah. xataa Waxaad tegi kartaa magaalada hoos at Sotterranea Napoli ah.
Soojiidashada NH soo jiidashada leh ee Roma Palazzo Cinquecento waa qurux 5-xiddig leh oo ku dhow xarunta tareenka ee ugu weyn Rome waxayna leedahay aragtiyo ku saabsan jardiinooyinka iyo burburka qadiimiga ah ee Mura Serviane. Haddii aad dareensan tahay sida sahaminta magaalada weligeed on foot, aad tahay in nasiib. Waxaad madax kartaa in si soo jiidashada badan Dhawyahay 2km: Coliseum ee, Talaabooyinka Isbaanish, Trevi Isha, Museum Qaranka of Rome, Teatro dell'Opera di Roma, Santa Maria Maggiore, Kaniisadda of Santa Susanna, iyo Talaabooyinka Isbaanish.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hotels-near-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Saldhigga tareenka	tareen safarka	safarka